डा. केसीको अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन डडेल्धुरा पुगे डाक्टरहरु - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ डा. केसीको अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन डडेल्धुरा पुगे डाक्टरहरु
डा. केसीको अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन डडेल्धुरा पुगे डाक्टरहरु
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ कात्तिक २५ गते, १०:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं–डडेलधुरामा गएर १७ औं अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्न आगामी चिकित्सक संघको निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेदवारसहितको टोली डडेल्धुरा पुगेको छ ।
आगामी माघमा हुने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका डा. पुष्पमणि खरालसहित डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डा. तोषिमा कार्की र मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा कालुसिंह खत्री पुगेका छन् ।
अनसनको सातौ दिन उनीहरु डडेललधुरा पुगेका हुन् । आफूहरुले आइतबार राती र सोमबार बिहान डा. केसीलाई भेटगरी ऐक्यबद्धता जनाएको अध्यक्षका प्रत्यासी खरालले जानकारी दिए ।
भेटपछि जारी उनीहरुको जारी गरेको विज्ञप्तीमा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको र अनसनरत डडेल्धुरा अस्पतालमा उनको थप उपचारका लागि प्रविधी र जनशक्तिको कमी रहेको भन्दै तत्काल डा. केसीसँग छलफल गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान समेत माग गरिएको छ ।
भेटमा आफूहरुले डा. केसीलाई जीवन रक्षाका लागि काठमाडौमै गएर आनसन बस्न आग्रह गरेको डा. खरालले बताए । तर, डा. केसीले डडेलधुराबाट अन्त जान मानिरहेका छैनन् ।
अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी डक्टर्स सोसाइटीकी अध्यक्ष डा. कार्कीले प्रशासनले जबरजस्त अनसनस्थलबाट उठाउन खोजिरहेको तर डा. केसीले नमानिरहेको बताइन् । ‘सरकारले जुम्लामाजस्तै अपहरणको शैलीमा सरलाई अन्य ठाउँमा लैजान खोजिरहेको छ, उहाँले मान्नुभएको छैन्,’ डा. कार्कीले हेल्थआवाजसँग भनिन्, ‘सरले यहाँका जनता र मेरो अनसनको अपमान नहुनेगरी सरकारले सम्बोधन गर्छ भनेमात्र म जान तयार छु भन्नुभएको छ ।’
डा. कार्कीकाअनुसार डा. केसीको शरीरमा चिनीको मात्र कम हुँदै गएको छ भने पिसाबमा संक्रमण देखिन थालेको छ । साथै रक्तचाप पनि न्युन रहेको छ ।